Shirkii Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka oo Maanta ka furmaya Muqdisho – ASM Raage
Shirkii Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka oo Maanta ka furmaya Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo Magaalada Muqdisho Shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka Qaran oo ay soo qabanqaabisay Xukuumada xilgaarsiinta Soomaaliya.
Waxaa shirkan ka qeyb galaya madaxda DF iyo iyo kuwa shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah, iyadoo uu shir guddoominayo RW Somalia Max’ed Xuseen Rooble oo shirkan horey u iclaamiyey.
Dhamaan hogaamiyeyaasha ayaa ku wada sugan Muqdisho marka laga reebo Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe oo la filayo inuu caasimada soo gaaro saaka oo Sabti ah, saacado ka hor furitaanka shirka.about:blank
Shirkan oo ka furmaya Teendhada Afisiyooni ayaa waxaa looga hadli doonnaa qodobo ay ka mid yihiin fulinta heshiiskii 17-ka Septembar iyo qodobadii ay saareen guddigii farsamada ee ku shiray Baydhabo 16-kii Febraayo, kuwaasoo lagu xalinayey tabashooyinka ay qabeen dowlad goboleedyada qaar.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay dabayaaqadii bishii hore in laga laabtay muddo kororsigii labada sano ahaa ee uu ansixiyey Baarlamanka Somalia ee sababay qalalaasihii ka dhacay Muqdisho, isagoo intaas ku daray in loo laabanayo doorasho dadban, wuxuuna xusay in RW Rooble uu ku wareejiyey maamulka hanaanka doorashada dalka.
Shirkan ayaa la filayaa iney ka soo baxaan go’aano horseeda qabashada doorashooyinka labada aqal oo ay xigi doonto doorashada Madaxweynaha dalka hogaamin doona afarta sano ee soo socota.
Maraykanka oo ka hadlay shirka Muqdisho uga furmaya Madaxda Soomaalida